Ekele! Site na Worst Worth, Texas
ajụjụ Ekele! Site na Worst Worth, Texas
1 afọ 4 ọnwa gara aga #867 by sdatcher
Enwere m obi ụtọ ịchọta ebe a. Ana m efe FSX ruo ọtụtụ afọ ma zụrụ P3D v4. Ana m agbalị ibudata faịlụ ole na ole ka m wee rụọ ọrụ akaụntụ Jumbo. Enwere m ihe ịma aka na-ebute nbido ịmalite. Mpudata windo ahụ gosipụtara wee pụọ n'enweghị ihe ọbụla. Ana m agba Windows 10 ọsọ na mmelite kachasị ọhụrụ.
A ga-atụle aro ọ bụla. Ndoo maka ajụjụ mbụ.